Heshiiskii u dambeeyey oo maanta laga gaarayo ka bixitaanka Ingiriiska ee Midowga Yurub | Somsoon
Home WARAR Heshiiskii u dambeeyey oo maanta laga gaarayo ka bixitaanka Ingiriiska ee Midowga...
Heshiiskii u dambeeyey oo maanta laga gaarayo ka bixitaanka Ingiriiska ee Midowga Yurub
Madaxda dowladda Ingiriiska iyo kuwa Midowga Yurub ayaa mar kale yeelanaya kulamo waji ka waji ah oo ay uga doodayaan in heshiis laga gaaro waqtiga uu Ingiriisku si rasmi ah uga baxayo ururka Midowga Yurub.
Ra’iisul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson iyo madaxweynaha Midowga Yurub haweeneyda la yiraahdo Ursula Von Der Leyen ayaa maanta yeelanaya kulan gaar ah, kaasi oo ujeedkiisu yahay in la gaaro heshiiskii ugu dambeeyay ee la xariira qorshaha Ingiriisku Midowga Yurub uga baxayo.
Ergada ay labada dhinac kala hoggaaminayaan ayaa soo jeedinaya in heshiis in la gaaraa ay tahay lama huraan, maadaama qorshuhu yahay in marka la gaaro 31-ka bishaan December uu dhamaado heshiiska ganacsiga iyo suuqa xorta ah ee Ingiriiska iyo Midowga Yurub.
Heshiisyada ka bixitaanka Ingiriiska ee Midowga Yurub ayaa intooda badan horay loo gaaray, waxaase harsan kuwa kale oo muhiim ah oo ganacsigu ugu horeeyo.
Article horeShiinaha: Gurmad dad badan looga soo badbaadinayo god ku dumay oo socda
Article socoda QM oo mudo kordhin u sameysay ciidamada shisheeye ee ilaaliya badda Soomaaliya